RFID ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတူကတ်, ပုံတူအချိန်တက်ရောက်ကတ်, Employee Card, Portrait ID Card, Portrait Staff Card, RFID Digital Photo Card, ဓာတ်ပုံန်ထမ်းကဒ်, Photo ID Card
 » RFID Card ကို » အခြားအမျိုးအစားကဒ် / တံဆိပ်
RFID ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတူကတ်, ပုံတူအချိန်တက်ရောက်ကတ်, ဓာတ်ပုံန်ထမ်းကဒ်
အခြားအမျိုးအစားကဒ် / တံဆိပ် Employee Card, Photo ID Card, Portrait Staff Card, ပုံတူအချိန်တက်ရောက်ကတ်, RFID Digital Photo Card, RFID ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတူကတ်
အရွယ်: 85*54*0.76မီလီမီတာ, သို့မဟုတ် 10 * 7mm, 6.5*9.5မီလီမီတာ, အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ပစ္စည်း: PVC / ကို ABS / PET / PETG / စက္ကူ
post-ဖြစ်စဉ်ကို: လွှာ, တစ်လှည့်လည်အပေါက်ဆော့ကစားသို့မဟုတ်ရှည်လျားပြားချပ်ချပ်အပေါက်ဆော့ကစား
optional အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးထုတ်ကုန်: ပလပ်စတစ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ, လောက်လွှဲ, ကလစ်များ, တံသင်
Digital Portrait Card isapersonal information card made by digital printing, and prints the photos, အမည်များ, positions, numbers, images and other materials directly on the PVC card by single-sided or double-sided color printing and double-sided covering film.
Used asacompany, စက်ရုံ, school and personal portrait cards, such as work permits, student ID cards, attendance cards, access ကိုထိန်းချုပ်ကတ်များ, parking cards, representative cards, exhibition cards.
အင်္ဂါရပ်များ: Clear pattern, lasting color, never off, not easy to break, တောက်ပသော, high gloss, used long time.
အားသာချက်များ: Digital Portrait Card isalaminate of high temperature and pressure PVC card, compared with the current market-free laminated PVC card has the following advantages:
2, the combination of ordinary portrait card and RF card:acollection of portrait cards and radio frequency, ကဲ့သို့: RFID attendance card, portrait ID card, consumer card, M1 card.
I am interested in your product RFID Digital Portrait Card, ပုံတူအချိန်တက်ရောက်ကတ်, ဓာတ်ပုံန်ထမ်းကဒ်
နောက်တစ်ခု: ကတ်ဟာ Off ခြစ်ရာ, အောနေတယ် Card ကို, Scratch လက်မှတ်, Password ကို Coating ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Card ကို